Fahalalahàna miteny · Avrily, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Fahalalahàna miteny · Avrily, 2010
Tantara mikasika ny Fahalalahàna miteny tamin'ny Avrily, 2010
Armenia 26 Avrily 2010
Na dia mbola mihisatra aza ny fidiran’ny internet any Atsimon'ny Caucase, ny fambara rehetra dia maneho fa ireo haino aman-jerim-baovao sy ara-sosialy dia mitana andraikitra lehibe eo amin'ny tontolon'ny fampivelarana ny demokrasia sy ny hafanam-po any an-toerana. Miaraka amin'izany fijery izany ao an-tsaina, ny Open Society Georgia Foundation (OSGF), ny Georgian Institute of Public Affairs (GIPA) sy ireo mpanome tànana hafa dia nikarakara ny Fihaonana voalohany ho an'ny Fanavaozana ara-Sosialy ao Tbilissi, any Georgie ny 8-10 Aprily, hetsika izay hokarakaraina midanindran-dàlana amin'ny fihaonambe momba ny Haino aman-jery ara-Sosialy ho an’ny Fanovana Sosialy.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 17 Avrily 2010
Taiwan: Angatahan'ny polisy ny IP an'ireo mpampiasa ny Plurk [na ‘Plurkers’]
Taiwan (ROC) 09 Avrily 2010
Plurk dia lafika iray fitorahana blaogy kiritika isan'ny malaza ao Taiwan. Vao haingana, ny 29 MArtsa 2010, Alvin Woon, iray amin'ireo namorona azy dia nandefa ‘plurk’ iray [avy amin'ny mpandika: angamba fomba iray ilazana ny ‘hafatra’ io teny io], nilazany ny naharaisany taratasy avy amin'ny polisy mangataka ny IP an'ny...
Tonizia: WAT.TV, fahatelo amin'ny tranonkala fifampizaràna video voasakana!
Politika 07 Avrily 2010
Andro vitsy lasa izay, nosakanan'ny fanjakana Toniziana ny fidirana ho ao amin'ny WAT.TV, tambajotran-tserasera sosialy iray sady tranonkala fifampizaràna media, izay heverina ho ny laharana faha-3 amin'ireo mpandefa video amin'ny aterineto ao Frantsa. Io ihany koa no fahatelo amin'ny tranonkala fizaràna video voasakana teto amin'ny Firenena. Voalohany indrindra dia nosakanan-dry...
Libanona: Feo voalohany voarahona
Ejipta 05 Avrily 2010
Fantatra ary notsiriritina tany amin'iny faritr'i MENA iny noho ny fahalalahan'ny tontolo virtoaly (cyberspace) nananany i Libanona. Tsy dia izany loatra intsony nony nanamarika ny volana Martsa ny olan'ny sivana aterineto voalohany tao Libanona. Manome antsipirihany maro i Layal Al Khatib ao anatin'ity lahatsoratra ity.
Vazo miteny – Lahatsarin-kira vaovao avy any Tibet
Azia Atsinanana 04 Avrily 2010
Mitodika any amin'ny “vazo miteny” indray ny bolongana manana tetikasa fandikan-teny High Peaks Pure Earth amin'ny fandikana ny tononkira Tibetana hita amin'ny lahatsarin-kira Tibetana misy mamoaka amin'ny aterineto. Tamin'ny faha-10 ny volana marsa tamin'ity taona ity dia nampiseho lahatsary hip hop mitondra ny lohateny hoe “Taranaka vaovao” [New Generation] avy...
Greenpeace vs. Nestle – manodidina ny fahalalàhana maneho hevitra
Hafanàm-po nomerika 01 Avrily 2010
Tapa-bolana izao no nahamarihana fa niakatrakatra ny adihevitra manodidina ny fanentanana ataon'ny Greenpeace tato ho ato mikendry manokana ny Nestle noho ny fampiasan'izy ireo ny menaka voanio izay mitarika fahasimbana goavana ho an'ny tontolo iainana. Ny fanentanana dia nanomboka tamina video viral iray (horonantsary miresaka otrikaretina) nampakarina tao amin'ny YouTube...